လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်, Galvo လေဆာစက် - ရွှေ laser
GOLDEN laser ကြိုဆိုပါသည်
GOLDEN laser အသိဉာဏ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပေးအာရုံစိုက်နှင့်လေဆာဖြေရှင်းချက် automated ။
, ဖြတ်တောက် engraving နှင့် marking အဘို့လေဆာစနစ်ထုတ်လုပ်သူ။ အတွက်အထူးကု CO2 လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် နှင့် Galvo လေဆာစက်.
အသုံးပြုသူများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးမှတိကျတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းပစ္စည်းများနှင့်အတူလျှောက်လွှာစမ်းသပ်မှုမှပထမဦးဆုံးအတိုင်ပင်ခံ မှစ. - GOLDEN laser သာတစ်ခုတည်းစက်ပြည့်စုံလေဆာဖြေရှင်းနည်းများ, ကမ်းလှမ်း!
ဗွီး laser Cutter
Filter ကိုပိတ်စ / စက်မှု Filtration ထည်ဘို့အတွက် CO2 လေဆာ Cutter
မြင့်မားသောတိကျဂီယာနှင့်ထိန်သိမ်း။ 1200mm / s အမြန်နှုန်းတက်ဖြတ်တောက်ခြင်း။ ကမ္ဘာ့ဖလား-class ကို CO2 သတ္တု RF လေဆာ 150W, 300W, 600W ။ လေဟာနယ်ပေါ်ကို။ အလိုအလျောက်နို့တိုက်ကျွေးရေး, တင်းမာမှုဆုံးမခြင်း။
ဂီယာ & သိုလှောင်ဆင်နည်းပညာဆိုင်ရာ•အထည်အလိပ်ဘို့အတွက် CO2 လေဆာ Cutter Driven
လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်မောင်းနှင်ဂီယာ & ထိန်သိမ်းမြင့်မားသောပါဝါ CO2 လေဆာရောင်ခြည်ပြွန်ဆောင်ရွက်ရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခိုင်မာတယ်။ ဒါဟာပျံသန်းမှန်ဘီလူးနှင့်အတူစူပါမြင့်မားတဲ့အရှိန်အမြန်နှုန်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်းသိထားသညျ။
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း high မြန်နှုန်းအထည်ချုပ်အထည်အလိပ်လေဆာ
အလတ်စား & သေးငယ်တဲ့သုတ်များနှင့်စိတ်ကြိုက်အဝတ်အစားများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သောအဝတ်ကိုထုတ်လုပ်မှု၏အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများသည်။ ပေါ်ကိုအလုပ်လုပ်စားပွဲ, အော်တိုလမ်းခွဲနှင့်အရှည် nesting များနမူနာကျော်။
မော်ဒယ်အမှတ်: XBJGHY-160100LD II ကို
တစ်ဦးချင်းစီကတခြားများ၏လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်သောနှစျခုလေဆာရောင်ခြည်ဦးခေါင်းတစ်ပြိုင်နက်ကွဲပြားခြားနားသောဂရပ်ဖစ်ဖြတ်နိုင်ပါ။ လေဆာရောင်ခြည်အပြောင်းအလဲနဲ့ (စသည်တို့ကိုလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း, လာကြတယ်, ကျမ်းပြုဆရာ,) ၏တစ်ဦးအမျိုးမျိုးတစ်ကြိမ်မှာလက်စသတ်နိုင်ပါတယ်။
မော်ဒယ်အမှတ်: ZJJF (3D) -160LD
ပျံအထည်အလိပ်လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်လှိမ့်ပုံမှ roll
တဦးတည်းခြေလှမ်းအတွက် marking စဉ်ဆက်မပြတ်ထွင်းထုပြီး 3D ပြောင်းလဲနေသော Galvo စနစ်, ။ လေဆာနည်းပညာ "ဟုအဆိုပါယင်ကောင်အပေါ်" ။ ကြီးမားသော format နဲ့ထည်, အထည်အလိပ်, သားရေ, ဂျင်း, နဲ့ Eva ထွင်းထုများအတွက်သင့်လျော်သော။
မော်ဒယ်အမှတ်: ZJ (3D) -170200LD
ဖိနပ်စက်မှုဝန်ကြီး Galvo လေဆာသားရေအက္ခရာ တင်. ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ထိပ်တန်းအမြန်နှုန်းနှင့်အကြီးစား format နဲ့လေဆာထွင်းထု, perforating နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း။ ဂီယာထိန်သိမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ dual မောင်းနှင်မှုစနစ်။ optimized galvanometer စနစ်။
မော်ဒယ်အမှတ်: ZJ (3D) -9045TB
သားရေဖိနပ်အဘို့အမြင့်မြန်နှုန်း Galvo လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
CO2 RF သတ္တုလေဆာ 150W 300W 600W ။ 3D ပြောင်းလဲနေသော galvanometer ထိန်းချုပ်မှုစနစ်။ အလိုအလျောက်တက်ဆင်း Z ကိုဝင်ရိုး။ ပျားလပို့ကိုအလုပ်လုပ်စားပွဲပေါ်မှာအလွိုင်းအလိုအလျောက်လွန်းသွပ်-သံ။
မော်ဒယ်အမှတ်: ZJJG (3D) 170200LD
ဂျာစီအထည်အလိပ်များအတွက် Galvo လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ဖောက်ထားစက်
ဖြတ်ထွင်း, perforate နှင့်နမ်း-ဖြတ်ဂျာစီ, polyester, မိုက်ခရိုတောင်မှလမ်းပိုင်းထည်များအတွက်နိုင်သောတစ်ဦးကစွယ်စုံလေဆာစက်။
မော်ဒယ်အမှတ်: XBQNZDJG-160120LD II
ရွှေလေဆာ Self-ကော်တံဆိပ်များဖြတ်တောက်ခြင်းသေဆုံး၏လယ်ပြင်တွင်စက်မှုဇုန်လေဆာနည်းပညာကိုအသုံးချခဲ့သည်။ လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်း system ကိုလှိမ့်ချလိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိပ်နှင့်အတူ, သငျသညျစသည်တို့ကိုအလွန်တိကျစွာကော်တံဆိပ်များ, ပုံနှိပ်တံဆိပ်များ, စတစ်ကာများ, စက္ကူ, ရုပ်ရှင်, ဖြတ်နိုင်ပါတယ်
CO2 RF လေဆာ 70W, 100W သို့မဟုတ် 150W နှင့်အတူဤလေဆာရောင်ခြည်ဦးသေဆုံးရှုးအများဆုံးကို web width ကို 230mm ။ လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်း system ကိုလှိမ့်ချလိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိပ်နှင့်အတူ, သငျသညျစသည်တို့ကိုအလွန်တိကျစွာကော်တံဆိပ်များ, ပုံနှိပ်တံဆိပ်များ, စတစ်ကာများ, စက္ကူ, ရုပ်ရှင်, ဖြတ်နိုင်ပါတယ်
လေဆာ Reflective ပစ္စည်း / လွှဲပြောင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်အဘို့အစက်ဖြတ်တောက်ခြင်း Die
high-မြင်သာအဝတ်အစားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စုံလင်သောလေဆာသေ-ဖြတ်ရောင်ပြန်ပစ္စည်း။ မြေတပြင်လုံး-ဖြစ်စဉ်ကိုအလိုအလျောက်။ တိကျစွာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း
ကျနော်တို့လေဆာနည်းပညာအပေါ်အခြေခံ application ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။ သင့်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း Choose: သင်တို့အဘို့အသင့်တော်ဆုံးလေဆာဖြေရှင်းချက်ညာဘက်
Banner & အလံ
Tube & ပိုက်
ယုဂ်-အောင်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုအဖြစ်, လေဆာရောင်ခြည် ပို. ပို. ရိုးရာလုပ်ငန်းစဉ်များအစားထိုးမတူနိုင်တဲ့အားသာချက်နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေ laser (PDF ဖိုင်ဖိုင်) အကြောင်း
သတင်း & ဖြစ်ရပ်များ
တိကျကုန်ထုတ်လုပ်မှု Excellent ကကိုမီအောငျလို
ပေးသူဦးစီး laser Solutions
လေဆာရောင်ခြည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်း 20 '' အတွေ့အကြုံ, စဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, GOLDEN laser ခေတ်မီစိတ်ကြိုက်စွမ်းရည်နှင့်အတူလေဆာစက်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာသည်။
GOLDEN laser သင်သည်သင်၏တိကျတဲ့လျှောက်လွှာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေဆာဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ် - သင်ကကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ကူညီအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရိုးရှင်းပြီးပိုအမြတ်အစွန်းရစေ။
အဆိုပါပင်လယ်ရပ်ခြားစျေးကွက်မှာတော့ GOLDEN laser ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်ထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးကွက်-oriented ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစနစ်ဖြင့်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထက်ပိုနိုင်ငံပေါင်း 100 နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအတွက်ရင့်ကျက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကွန်ရက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။